You searched for mahatoky - Page 3 sur 4 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady 16 Febroary 2020
ALAHADY 16 FEBROARY 2020 – Alahadin’ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-pahasoavana – VMFP “fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin’ny voa mety ho lò, fa tamin’ny tsy mety ho lò” : 1 Petera 1: 23 Ny fotoana androany dia natokana indrindra ho fiaraha-miombom-bavaka amin’ny VMFP na ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena. …
Continuer la lecture de « Alahady 16 Febroary 2020 »
Alahady 09 Febroary 2020
ALAHADY 09 FEBROARY 2020- ALAHADIN’NY BAIBOLY « Koa amin’izany na zovy na zovy no mandre izany teniko izany ka mankatò azy, dia hoharina amin’ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin’ny vatolampy. » (Matio 7:24) Alahady faharoa niandraiketanan’ny Vaomieran’ny Aim-panahy androany sy alahadin’ ny Baiboly mbola nibanjinana ny lohahevitra hoe « Mahatoky ny Teny …
Continuer la lecture de « Alahady 09 Febroary 2020 »
Alahady 02 Febroary 2020
ALAHADY 02 FEBROARY 2020 – Alahady Fandraisana “Mahatoky ny Teny Vavolombelon’ny Tompo » “Mahatoky avokoa ny didiny rehetra » Salamo 111:7b Alahady voalohany ibanjinana ny lohahevitra « Mahatoky ny Teny vavolombelon’ny Tompo » androany ary alahady fahaefatra manaraka ny Epifania. Izao alahady izao no nandraisana an-dRakotonirainy Mendrika Nathan ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo. Ny Mpitandrina miana-draharaha Razafinarivo …
Continuer la lecture de « Alahady 02 Febroary 2020 »
Vatsimpanahy janoary 2020
Maneho ny tana-maheriny ny Tompo Andriamanitra Tsianjery : “Ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tanako” Jaona 10:28 Tsy miova Andriamanitra hatrizay hatrizay, Izy no voalohany ary Izy koa no farany. (Isaia 48:12) Ny tana-maherin’i Jehovah no nahary sy nampisy izao rehetra izao (Isa …
Continuer la lecture de « Vatsimpanahy janoary 2020 »
Alahady 05 Janoary 2020
ALAHADY 05 JANOARY 2020 – ALAHADIN’NY TAOM-BAOVAO « MANEHO NY TANA-MAHERINY NY TOMPO ANDRIAMANITRA » “…ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy…” : Jaona 10 : 24-30 Ny Tompo Andriamanintsika dia Andriamanitra be fitiavana sady be faharim-po ka izany no isaorantsika sy hiderantsika Azy. Nomeny ity taona vaovao 2020 ity isika …
Continuer la lecture de « Alahady 05 Janoary 2020 »
ALAHADY 15 DESAMBRA 2019 Alahadim-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista “FMKS”- Fanokafana ny Jobily faha-50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena « Ary izay trano idiranareo, dia lazao aloha hoe: Fiadanana ho amin’ity trano ity. Ary raha misy zanaky ny fiadanana ao, dia hitoetra ao aminy ny fiadanana tononinareo; fa raha tsy izany, dia hiverina ho aminareo ihany …
Continuer la lecture de « Alahady 15 Desambra 2019 »
Alahady 08 Desambra 2019
Alahadin’ny Sampana Sekoly Alahady « Mba ho tahaka ny zava-maniry maroroka ny zanakai-lahy, Ary ho tahaka ny vato fehizoro voasoratra tsara toy ny fomban’ny lapan’andriana ny zanakai-vavy. » (Salamo 144:12) Alahady 8 Desambra 2019. Alahady hitondrana ambavaka ny sampana sekoly alahady. Alahady faharoa manaraka ny advento. Herinandrombokatry ny sampana sekoly Alahady ary mankalaza ny ivon’izany izy ireo. …
Continuer la lecture de « Alahady 08 Desambra 2019 »
Alahady 01 Desambra 2019
ALAHADY 01 DESAMBRA 2019 “Iaino ny fiadanan’ny Tompo » “Fiadanana, fiadanana ho an’izay lavitra sy ho an’izay akaiky! hoy Jehovah, ka dia hahasitrana azy Aho.” Isaia 57 : 19 Mandia ny volana farany amin’ity taona 2019 ity isika ankehitriny ka izany no isaorantsika sy hiderantsika ny Tompo. Izy no mbola manome ny fahasoavany ho antsika ka …
Continuer la lecture de « Alahady 01 Desambra 2019 »